Sisankxwe eMzantsi Afrika bubudlwengu neXenophobia - SA Breaking News
Sisankxwe eMzantsi Afrika bubudlwengu neXenophobia
By Doug Mattushek - 09 September 2019Views : 361
Ibhalwe ngu: Mfundo Feke
Zithe gqolo izehlo ezigwenxa zokubulalana kwabantu eMzantsi Afrika. Amanina neentsana zawo asantywizisa iinyembezi nangoku ngoba ziyathontelana izehlo zodlwengulo nokubulawa kwawo. Ayazibuza amabhinqa oMzantsi Afrika ukuba, 'ingaba ndingolandelayo na'?
Oku kulandela isehlo sakutsha nje sokudlwengulwa kubulawe igqiyazana lesikolo u-Uyinene Mrwetyana nobefihlwa ngempela veki le sisuka kuyo kuCentane.
Kuninzi okwehlela uMzantsi Afrika ngexesha elinye. Kuyakhula ukubiwa kwabantwana. Kwisehlo sakutsha nje somntana ebebiwe esikolweni iLaerskool Kollegepark wafunyanwa, uyise wotitshalakazi kwisikolo esi uthi intombi yakhe ibisebenza nabarhanelwa abathimbe umntana befuna imali. Lotata uthi kunxibelelwano lukaWhatsapp phakathi kwentombi yakhe nabarhanelwa bayavakala bekucwangcisa ukuthimba uAmy'Leigh de Jager ominyaka mithandathu.
Kananjalo ukuhlaselwa nokucalucalulwa kwabantu basemzini kwingingqi ezithile nako sekusube imiphefumlo eliqela. Bahlanu ngoku abantu abasweleke kwiXenophobia eRhawutini. Ngobusuku bangeCawe ziliqela iivenkile eziqhekeziweyo, kwathathwa impahla ngabahlali abazibhengeza njengabaqhankqalazi. Bafikelela kwishumi elinesithandathu abarhanelwa ababanjwe ngesisiganeko.
Ukusukela ngoLwesithathu weveki ephelileyo ilizwe laseNigeria liqalise ukuthutha abantu balo abakweli abanomnqweno wokugoduka emva kwezehlo zokubethwa kwabantu basemzini eMzantsi Afrika. Inqwelo moya yasimahla yaseNigeria ikweli loMzantsi Afrika ukuzakuthutha abasemzini abafuna ukugoduka.
KwaZulu Natala kubanjwe indoda emva kokumemelela kuFacebook ukuhlaselwa kwamashishini abantu bamazwe angaphandle. NgoLwesihlanu indoda eminyaka 27 ubudala ithumele kuFacebook imemelela kuhlaselwe amashishini abanini baseAfrika. Osomashishini bamangele emapoliseni kwalandela uphando olufikelele ekuvalelweni kwalendoda.